Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) - Hello Sayarwon
Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး)
Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) ကဘာလဲ။
Generic Name: Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်ခြင်းကို ကုသရန်အတွက် Ampicillin နှင့် Sulbactam တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ထားသော ဆေးကို အများဆုံးအသုံးပြုကြပါသည်။
Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ
ဒီဆေးကို သုံးစွဲရမယ့် ပမာဏနဲ့ အကြိမ်ရေကို သင့်ဆရာဝန်က လမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပြီး အသားထိုးဆေး ဒါမှမဟုတ် အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သူနာပြု ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်က သင့်ကို ဆေးထိုးပေးပါလိမ့်မယ်။
Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေး ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေး ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေး ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေး ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေး ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေးကို မသုံးစွဲခင် အောက်ပါအခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုရင် သင်ဆရာဝန်ကို အသိပေးသင့်ပါတယ်။
ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေးရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ရင်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ဆေးဗူးမှာပါတဲ့ အညွှန်းစာရွက်လေးမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေး နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေ သုံးစွဲနေရင် ဒါမှမဟုတ် အခြားသော ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ရှိနေရင်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။)
Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အခြားသော ဆေးများနည်းတူပင် ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေး ဟာလည်း အချို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအများစုဟာ အင်မတန်ဖြစ်ခဲပြီး ထူးထူးခြားခြားကုသပေးဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆေးသောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ပြဿနာတစုံတရာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တခုခုဆွဲထားသလို လေးလံမှုကို ခံစားရခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေး ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ဥပမာ allopurinol သို့မဟုတ် probenecid
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေး က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေး ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
Mononucleosis လို့ခေါ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတမျိုး။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေးကို သုံးစွဲရမယ့် ပမာဏကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အချို့သော ရောဂါအခြေအနေတွေအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆေးပမာဏတွေက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးမျိုးပွားအင်္ဂါလမ်းကြောင်းကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းများအတွက် : 1.5g (1g ampicillin + 0.5g sulbactam) – 3g (2g ampicillin + 1g sulbactam) ကို ၆နာရီခြားတခါ အသားထိုးဆေး ဒါမှမဟုတ် အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်တွင်းကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းများအတွက် : 1.5g (1g ampicillin + 0.5g sulbactam) – 3g (2g ampicillin + 1g sulbactam) ကို ၆နာရီခြားတခါ အသားထိုးဆေး ဒါမှမဟုတ် အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းများအတွက် : 1.5g (1g ampicillin + 0.5g sulbactam) – 3g (2g ampicillin + 1g sulbactam) ကို ၆နာရီခြားတခါ အသားထိုးဆေး ဒါမှမဟုတ် အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
Creatinin Clearance ပမာဏ 15-29 ml/min ရှိသူတွေအတွက် ၁၂နာရီခြားတခါ ထိုးပေးရပြီး
Creatinin Clearance ပမာဏ 5-14 ml/min ရှိသူတွေအတွက် ၂၄နာရီခြားတခါ ထိုးပေးရပါမယ်။
ကလေးတွေအတွက် Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Ampicillin And Sulbactam (အန်ပဆလင် နဲ့ ဆာလ်ဘက်တမ် ပေါင်းစပ်ဆေး) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေး ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးရည်ဖျော်ရန် ဆေးမှုန့် : ၇၅၀ မီလီဂရမ်၊ ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်။
Ampicillin နဲ့ sulbactam ပေါင်းစပ်ဆေး ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Ampicillin and Sulbactam. http://www.mayoclinic.org/drugs-
supplements/ampicillin-and- sulbactam-injection- route/description/drg-20072723.
Ampicillin and Sulbactam. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-52609/unasyn-
injection/details#uses. Accessed September 23, 2016.